५ सय चोरेर काठमाडौं छिरेका ऋषि धमला महिनाको कति कमाउँछन् ? कति छ उनको सम्पत्ति ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com ५ सय चोरेर काठमाडौं छिरेका ऋषि धमला महिनाको कति कमाउँछन् ? कति छ उनको सम्पत्ति ? - खबर प्रवाह
पत्रकार ऋषि धमला प्रश्न गर्ने शैली र हाउभाउले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो। हाक्काहाक्की प्रश्न गर्ने र कार्यक्रमलाई कसरी हुन्छ रोचक बनाउनेमा उनको ध्यान हुन्छ।रिपोटर्स क्लब नेपालका सभापति, प्राइम टिभीका अध्यक्ष, नेपाली रेडियो नेटवर्कका अध्यक्ष र रिपोटर्स नेपाल डटकमका सञ्चालक तथा प्रधानसम्पादकका रुपमा क्रियाशील धमला ‘धमलाको हमला’ र ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ नामक टक शो बाट नेपाली दर्शक स्रोतामाझ प्रस्तुत भइरहेका छन्।